गुलियो नै गुलियो भएर पनि खल्लो बन्यो नेकपाको चियापान !::Hamrodamak.com
गुलियो नै गुलियो भएर पनि खल्लो बन्यो नेकपाको चियापान !
नेकपाको चिपापान कार्यक्रममा पार्टीकै अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वली सहित अन्य दलका शिर्ष नेताहरु सहभागी भएनन् ।
काठमाडौँ । पार्टी एकिकरण पछि नेकपाको पहिलो चियापान कार्यक्रम भृकुटिमण्डपमा सम्पन्न भयो । कार्यक्रम आयोजकले भने जस्तो सानदार रुपमा सम्पन्न हुन सकेन । शुभकामना साटासाट र सहअस्तीत्वका लागि आयोजना गरिएको चियापानमा अन्तिम समयमा आएर प्रधानमन्त्री एबम् पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उपस्थित हुन सकेनन ।
आयोजकले कार्यक्रममा ५० हजार जनाको सहभागीता हुने अपेक्षा गरेको भएतापनि दश हजार बढिको सहभागिता रहेको अनुमान गरिएको छ । तर सोचेजस्तो सहभागिता देखिएन
अन्तिम समयमा मात्र नेपाली काग्रेंसका सभापति शेरबहादुर देउवा उपस्थित भएका थिए ।उंहाले पत्रकारहरुमाझ कुनै प्रतिकृया दिनुभएन । यस्तै भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका नेता सिताराम यचुरी, राजपाका नेता महन्थ ठाकुर, पूर्व सभामुख तारानाथ राणाभाट, पूर्व प्रधानसेनापती रुक्माङगन कटुवाल लगायतको उपस्थित थियो ।
पार्टी एकतापछिको पहिलो चियापान कार्यक्रममा नेकपाले कचौरीमा नमकिन, लड्डु, केरा र चियाको व्यवस्था गरेको थियो । चियापानमा सहभागीहरुलाई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम लगायतले स्वागत गरेका थिए ।
नेकपाको चिपापान कार्यक्रममा पार्टीकै अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वली सहित अन्य दलका शिर्ष नेताहरु सहभागी भएनन् । सवै दलका नेताहरुलाई आमन्त्रण गरिएपनि चियापान कार्यक्रममा सहभागि जनाएनन् ।
यस्तै नेकपा क्रान्तिकारी माओबादीका महासचिव मोहन वैद्य किरण पनि सहभागी भएनन् । यसैगरी विप्लव नेतृत्वको नेकपाका महासचिव नेत्रवीक्रम चन्द वीप्लव, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा पनि चियापानमा सहभागि हुनुभएन ।
कार्यकर्ता र आम सर्वसाधारणमा पार्टी एकता पछि जुन उत्साह थियो बिस्तारै नेतृत्वपंक्तीकै कार्यशैलीका कारण उत्साह नामेट वन्दै गएको छ । यस्तै नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई समेत सहभागी हुनुभएन ।